Ogaden News Agency (ONA) – Unugta JWXO Ee Magaalada Qabridahare oo Booqatay Qubuuraha Shuhadada.
Unugta JWXO Ee Magaalada Qabridahare oo Booqatay Qubuuraha Shuhadada.
Posted by Dulmane	/ February 15, 2019
Kadib colaado qarniyo qaatay oo wadanka Ogadenia kadhacay, waxay Shacabka Soomaalida Ogadenia mutaysteen wax kasta oo mini’aadamku uu mutaysan karo, waxayna shacabku wajaheen dhibaatooyin midba mid ay kasii darantahay.
Dhulka Soomaalida Ogadenia oo ah dhul aad ubalaadhan waxaa taako kasta oo kamid ah ku aasan qof mini’aadam ah oo inta badan ay galaafteen colaadaha gaamuray iyo hardankii udhaxeeyay Gumaystayaashii iyo Gumaysi diidkii.
20 kii sano ee udambeeyay ayay ciidamada gumaysigu bilaabeen bahdilaad iyo maydka oo aan la’aasin ama lagu dul dhaanteeyo taas oo uu raali ka ahaa taliskii macangaga ahaa ee talada laga xayuubiyay.
Dadka Shacabka ah ama Naftood Hurayaasha ah ee ladilay sanadahaas ayaa ahaa kuwo aan helin qabri ama xabaal fiican waxaana lagu hogayn jiray god yar oo aan bahalka ka qarin karin.
Dadkii lagu hogeeyay meelaha aan munaasabka ahayn waxaa kamid ahaa Naftiihure Cabdicasiis Ibraahim Cabdiraxmaan (Badh-cun) iyo labo kamid ah saaxiibadiisii halganka, Waxaana naftiihuraha lagu hogeeyay duleedka magaalada Qabridahare ee xarunta Gobolka Qoraxay, halkaas oo maydkoodu uu mudo qoraxda yaalay.
Xubno katirsan Unugta JWXO ee magaalada Qabridahare iyo maamulka Xafiisyada Jabhada ee Gobolka iyo Dagmada ayaa galabta booqasho kutagay goobtii lagu hogeeyay Naftii Hure Cabdicasiis Badh-cun iyo halgamayaasha kale, waxayna unugto go’aansatay in ay dib uhabeeyaan qabriga Naftood Hurayaasha oo aad udayacan.
Sidoo kale Unugta JWXO ee magaalada Qabridahare ayaa uducaysay Naftood Hurayaasha, iyagoo ilaahay uga baryay in uu Shahaadada ka aqbalo.